နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Windows ကို Repair လုပ်ဆောင်ခြင်း
ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ Windows Repair လုပ်နည်းလေးကိုပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်..။ကျွန်တော်
အရင်တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကွန်ပျူတာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်သောနည်းလမ်းများ ထဲမှာလဲဒီနည်း
ပါ..။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် Windows Repair လုပ်သင့်လဲဆိုတာကိုအကြမ်းဖျဉ်းလေးပြောပြ
Registry , System ပိုင်းတွေမှာ Error တွေတက်လာတာနဲ့အမျှကွန်ပျူတာကိုသုံးရတာအရင်လိုစိတ်တိုင်းကျ
ဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲစိတ်ညစ်ခံပြီးဆက်သုံးမလား? ဒါမှမဟုတ် Windows အသစ်ပဲပြန်တင် မလား ..?
ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး..ကျွန်တော်အခုပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးအတိုင်း Windows ကို Repair ပြန်လုပ်
ပေးလိုက်ပါ..။ဒါဆိုရင်တော်ရုံတန်ရုံ Error တွေလောက်ကိုအဆင်ပြေသွားစေပါလိမ့်မယ်..။ Repair ပြန် လုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့Windows ကိုအရင်တုန်းကလိုပုံမှန်ပြန်သုံးလို့ရသွားပါလိမ့်မယ်..။ဒီနေရာမှာကျွန်တော် တစ်ချက်ပြောချင်တာကတစ်ချို့ကကွန်ပျုတာကိုကိုင်ပဲကိုင်တယ်ဘာဆိုဘာမှကိုမလုပ်ရဲကြပါဘူး..။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲကြုံဖူးခဲ့ပါတယ်..။ဒါလေးသွားလုပ်လိုက်ရင်များစက်များတစ်ခုခုဖြစ်သွားမလား ၊ ပျက်များသွားမလားဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်..။ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းစက်ပစ္စည်းဆိုတာကြောက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး.။ဘယ်အရာမဆိုမလုပ်ပဲနေရင်သာဘာမှမသိတာပါ..။ဒါလေးကိုလုပ်ကြည့်လိုက်
လို့ဒါကဒီလိုရှိပါလား ၊ နောက်ထပ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတစ်ဆင့်ဆင့်ချင်းလုပ်
လဲကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ၊ ကိုသိထားတာလေးတွေထက်အားလုံးကိုပိုပြီးသိစေချင်တက်
ရင်နောက်ဘယ်ချိန်ပြန်လုပ်လုပ်မမေ့တော့ပါဘူး..။အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ Windows Repair လုပ်တယ်
ဆိုတာဘာမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် Repair လုပ်နည်းလေးကိုအောက်မှာပုံလေးတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထား
အရင်ဆုံးမိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ..။ပြီးတာနဲ့ကီးဘုတ်မှ F8 ကီးကိုအဆက်မပြတ်နှိပ်ထား
လိုက်ပါ..။ဒါဆိုရင် Advance Boot Options ထဲကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..။
အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိတို့က Administrator Password ပေးမထားရင် Password
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Restart ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ Repair လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီ..။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့
Windows Repair လုပ်ခြင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးအတန်အသင့်သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
Posted by Hajee Than Hla Oo at 9:27 PM